नयाँ सभामुखको लागी ओली-प्रचण्डको समर्थन कसलाई ? « Dhankuta Khabar
नयाँ सभामुखको लागी ओली-प्रचण्डको समर्थन कसलाई ?
प्रकाशित मिति : 14 October, 2019
सभामुख चयनबारे ओली र प्रचण्डबीच आजै बालुवाटारमा छलफल भएको छ । दुवै नेता प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे सहमत भएका छन् । दुवैले सम्भावित नामहरुबारे प्रारम्भिक छलफल गरेको बुझिएको छ ।